Imamoglu wuxuu shaaciyey taariikhda furitaanka Mecidiyekoy Mahmutbey Metro Line | RayHaber | raillynews
HomeTURKEYGobolka Marmara34 IstanbulImamoglu wuxuu shaaciyey taariikhda furitaanka Mecidiyekoy Mahmutbey Metro Line
16 / 02 / 2020 34 Istanbul, tareenka, GUUD, KENTİÇİ Systems Rail, Headline, Gobolka Marmara, Metro, TURKEY, VIDEOS
imamoglu mecidiyekoy mahmutbey wuxuu fuliyay xirmadii tijaabada ugu horreysay ee khadka metrooga
İBB Madaxweynaha Ekrem İmamoğlu ayaa yidhi,Kabataş-Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro ”waxay sameysay darawalkeedii ugu horreeyay ee tijaabada ah" Khadka Mecidiyeköy-Mahmutbey Line ", kaasoo ah wejiga koowaad ee Metro. Isaga oo baaray xarunta kantaroolka ee Tekstilkent, oo ah barta ugu dambaysa ee imtixaanka, İmamoğlu wuxuu ka qabtay isla hadalka isla markaana wuxuu la wadaagay macluumaad farsamo oo ku saabsan khadka.
Ekrem İmamoğlu, Madaxweynaha Dawlada Hoose ee Magaalada Istanbul (IMM) ayaa yidhi,Kabataş-Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro ”waxay sameysay darawalkeedii ugu horreeyay ee tijaabada ah" Khadka Mecidiyeköy-Mahmutbey Line ", kaasoo ah wejiga koowaad ee Metro. İmamoğlu wuxuu sidoo kale dib u furay "Mecidiyeköy Metrobus Line xiriisa lugta lugta", kaas oo laga saaray isticmaalkiisa sababta oo ah dhismaha khadka la isweydiinayo dhismaha ayaa la dhameystiray. Markay Tahay Tareenka Tijaabada M7, oo loo qaabeeyey darawal la'aan, İmamoğlu wuxuu socdaal 30 daqiiqo qaatay Mecidiyeköy Station ku tegay Tekstilkent Station, halkaas oo xarunta kontaroolada ay ku yaalliin, ay weheliso maamulka sare ee İBB iyo Qunsuliyadda Guud ee Faransiiska, Bertrand Buchwalter. Markuu baaray xarunta kontoroolka, İmamoğlu wuxuu la wadaagay macluumaad farsamo oo ku saabsan khadka iyo mashaariicda mustaqbalka. Imamoğlu ayaa ka jawaabay su’aalaha suxufiyiinta kadib khudbadiisa.
Waxa jira laynno badan oo metrooga ah oo laga filayo qaybaha waqooyiga iyo galbeedka ee Istanbul. Waa sidee xaaladda wadooyinkaas?
19ka Maajo, waxaan rajeynayaa inaan ku soo rogi doono qadka Mecidiyeköy-Mahmutbey waxaan rajeyneynaa in Istanbul ay dareemi doonto culeys aad u culus, gaar ahaan metrobus. Ugu yaraan asxaabteena qibradeysan waxay na siyaan hadalada noocaas ah. Intaa waxaa u dheer, khadka Eminönü-Alibeyköy ayaa ah shaqadii ugu horreysay ee aan ku soconno dhagaha. Wuxuu sidoo kale sameynayaa dadaal dheeri ah dhamaadka 2020 si uu ula kulmo Istanbulites rubucii ugu dambeeyay. Kuwani waa mawqifyo taagan, goolal taagan markii aan gaarno. Waxaan halkaan nimid waxaan aragnay xaalada meeshan 5-6 bilood kahor. Waxaan yeelanay saaxiibo ka qeyb galaya. Waxaan xasuustaa inay ahayd dhamaadka bishii Luulyo. Aad ayaan u daryeelaynaa. Ku dhawaad ​​sidaas, usbuucii hal mar, waxaan ku sameynaa ajandaha iyo qiimeynta xaaladda qadkayaga tareenka. tus Khadka Bostancı-Dudullu waa khad aan aad u caajiso oo aan ka xumahay. Sababtoo ah waxay ahayd qayb ka mid ah E-5, oo leh meel baabuurta la dhigto oo 1000 ah, waxay dejisaa tiro howlo ah booska xarunta wareejinta ee aad muhiimka u ah, laakiin waxay sidoo kale ku xireysaa khadka badda. Hadda, gelitaanka qorshaha maalgashiga waa dhacdo ina siineysa jidka aan ku heli karno halka laga helo maalgelinta. Aniga oo ah IMM, tani waa shaqo gaar ah oo aan diiradda saaray sidii aan u dardar gelin lahaa dhaqso badan. Waxaa jira wadiiqo aad u qiimo badan oo isku xira dadka meelaha ganacsiga ka jira, isugeynta isgoysyada E-5, waxay aadaan Bostancı, xeebta waxayna ka gudbaan khadka minibus. Aad ayey muhiim noogu ahayd in aan ku soo dallacno sicirka qorshaha maalgashiga. Dhinac, waxaan horeyba u xilsaarnay 3-da xariiq. Aynu haysanno khadadkayaga Göztepe iyo Ümraniye… Aynu haysanno khadka Sultanbeyli-Çekmeköy… Aynu haysanno khadka Tuzla-Pendik… Ku xidh iyaga Sabiha Gökçen oo leh hal dheg, khadka Tuzla-Pendik… Khadadka muhiimka ah. Xaqiiqdii, waxaan qorsheyneynaa in khadkeena dhinacayaga Anatolian uu nolosha ku soo noolaado si xoog lehna u socdaan. Dhamaan shaqooyinkaas aan sheegnay, waxaan u soconaa si dhakhso leh si aan u gaarno awooddeena 2024 kilomitir sanadka 600, khadadka ay sameysay Wasaaradda Gaadiidka. Waxaa jira qaybo ka mid ah xariiqyadan oo la isticmaali doono 2020 iyo 21. Aad ayey muhiim u tahay, qiimo badan. Waan faraxsanahay. Waxaan ka shaqeynaa sidii aan u soo bandhigi lahayn muwaadiniinteenna dariiqa tareenka ee Istanbul. Mashaariicdayada cusubi waxay noqon doonaan kuwa wax lagu daro. Sidaad sheegtay, galbeedka magaalada Istanbul waa dhibane fikirkan. Gaar ahaan, Khadkeena, oo dhex mara Başakşehir kuna kulma qaybta Baçeşehir-Esenyurt wixii ka dambeeya Mahmutbey, sidoo kale Beylikdüzü… Wadadan tareenka Beylikdüzü wuxuu ahaa shaqo metro oo sugaysay 17 sano. Qaybta tareenka dhulka ee Beylikdüzü ee ku xiran Sefaköy, waxaan sii wadnaa daraasadahayaga degdega ah ee sicirka, shaqada, naqshada mashruuca iyo maalgelinta. Xitaa waxaan helay warbixin kooban oo ku saabsan toddobaadkan. Waxaan rajeyneynaa, inaan ugu dhawaaqi doonno qandaraaska muwaadiniinta sida ugu dhaqsaha badan.
SAAMAYNTA MECIDIYEKOY-MAHMUTBEY LINE ON TRAFFIC
“Inta u dhaxaysa Mecidiyeköy iyo Mahmutbey, waxay gaaraysaa 1,5 saacadood inta lagu gudajiro saacadaha ugu badan ee taraafikada. Celcelis ahaan, Immisa daqiiqo ayaa khadkaan socon doona kadib furista? ”
Marka loo eego macluumaadka ay asxaabtu i siiyeen, waxay ku dhammayn doonaan khadkaan 30-35 daqiiqo, oo aan ka hadlayno 15 saldhig, 1 milyan oo rakaab ah maalintii. Tani waa xariiq leh awood aad u sareysa. Goor dambe, marka khadka Mahmutbey-Esenyurt la hawlgeliyo, waxay sidoo kale ku habboonaan doontaa hawlgalka 8-baabuur. Kani maahan khadka Mecidiyeköy-Mahmutbey, KabataşWaxay noqon doontaa khad ay ku jiri doonaan Beşiktaş gudaha Beşiktaş kuna sii wadan doono Esenyurt. Nidaamka qolkayaga xakameynta, oo aad hadda aragtay, wuxuu isu rogi doonaa mashruuc ku saabsan nidaamkaan oo leh awood iyo karti uu maareyn karo nidaamyadaas maadaama uu waqtigiisu dhammaado.
SAAMAYNTA KANAL ISTANBUL EE MASHRUUCYADA
"Kanal Istanbul ma hor istaagaysaa mashruucan dhulka hoostiisa mara?"
Kanal Istanbul dabcan waa caqabad. Waxay sidoo kale saadaalinaysaa isbeddelo badan oo ku saabsan mashaariicda. Kanal İstanbul waxaa ku kacaya qiyaas ahaan 20 bilyan oo liras oo keliya iyadoo la beddelayo shaqooyinka hadda jira ee'SKİ '. Sidaas; Khadadka ISKI, kanaalada, dhirta daaweynta, xitaa wareejinta iyo wareejinta, 20 bilyan oo lira. Ma ogtahay waxa loola jeedo 20 bilyan oo rodol? Xilligan la joogo, waxay ka dhigan tahay samaynta dhammaan khadkeena metrooga in la joojiyo. Kaliya culayska ISKI. Si cad ayaan u iri: Kanal Istanbul waxay ku jirtaa maskaxda 'maqnaanshaha' maskaxda maskaxda ee Istanbul; Sida laga soo xigtay in ay lacag ee our jeebka 'maya' waa bixinta dinaar Turkey lacagtii ka wakiil ah 'maya' waa bixinta. Hawsha kulanka Istanbul ee mashruuca noocan oo kale ah oo ka wakiil ah eedeymahayaga metro waa maqnaanshaha 'maya'.
Madaxweyne Imamoglu, Kabataş Mahmutbey wuxuu ku dhawaaqay maalinta furitaanka khadka tareenka dhulka hoostiisa
Wasiirka Elvan ayaa ku dhawaaqay taariikhda dhismaha xawaaraha sare ee tareenka si uu u ballaadhiyo Habura
Raisal wasaaraha Binali Yildirim ayaa ku dhawaaqay taariikhda hindisaha ee Istanbul
Tahir Büyükakın ayaa ku dhawaaqay wakhtiga kama dambaysta ah ee Akcaray
TCDD oo ku dhawaaqday taariikhda cusub ee qandaraas-siinta shirkadda Isku-xirka Ganacsiga ee Bursa